प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः बेरोजगार फारम कसरी भर्ने ?
२ चैत्र २०७५, शनिबार ०९:५०
काठमाडौं — नेपालमा बेरोजगारी युवाहरुलाई रोजगार दिन उदेश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने मूल नारासाथ सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ गरेको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालभरि रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रवारबाट नै सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको निवेदन लिने काम सुरु गरिने बताइएको छ ।
वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्न सकिने र योग्यता पुगेका बेरोजगारलाई त्यही सूचीका आधारमा रोजगारीको अवसर दिइने बताइएको हो ।
कस्तो छ सर्त ?
प्रधाानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिनको काम नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहालका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार दिनको रु ५१७ का दरले वर्षको कम्तीमा १०० दिन हुन्छ । त्यसको ५० प्रतिशत हिसाब निकाल्दा वार्षिक रु २५,८५० हुन आउँछ । तर, कुनै पनि बेरोजगारले केही दिन काम पाएको छ भने त्यो दिनको भत्ता काटिनेछ ।
त्यसमाथि अन्य शर्तहरू पनि लागु हुने बीबीसी नेपालीले लेखेको छ । सोही अनुसार रोजगारीको अवसरभन्दा बाहिर रहेकाहरूको सूची तयार पार्न लागेको सरकारले त्यसका लागि शुक्रवारदेखि आवेदन लिने काम सुरु गर्ने भएको छ।
के—के छन् आवश्यक योग्यताहरु ?
प्रधानमन्त्री रोजगार प्राप्त गर्न सर्वप्रथम नेपाली नागरिक हुनुपर्ने जनाईएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तो व्यक्तिको सरकारले तोकेको न्यूनतम आम्दानीभन्दा कम आम्दानी भएको हुनुपर्छ वा वर्षदिनमा सो बराबरको आम्दानी हुने गरि कुनै रोजगारीमा आबद्ध नभएको हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिले म बेरोजगार हो भनेर फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चैत महिनाभरि निवेदन दिन सकिन्छ ।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत पाँच बर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणबमोजिम प्रत्येक वर्ष झन्डै पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्ने बीबीसी नेपालीले लेखेको छ ।
तीमध्ये दैनिक सरदर एक हजार युवा कामका लागि विदेश जाने गर्छन्। सर्वेक्षणका अनुसार देशमा पूर्ण बेरोजगारीको दर २।३ प्रतिशत मात्र छ। तर अर्धबेरोजगारीको दर भने ३० प्रतिशत छ।